Magweta eInternational Litigation muNetherlands - Law & More
Gweta repasi rose
Isu tine ruzivo rwakawanda mumatare eDutch uye epasi rose ematare, gakava rekugadzirisa uye gakava. Kana zvirongwa zvikaitika kune dzimwe nyika kunze kweNetherlands, isu tinobatana nemagweta akavimbika, tichiva nechokwadi chekuti zvido zvevatengi vedu zvinodzivirirwa nemazvo.
Kuita bhizinesi kunoreva kuyambuka miganhu. Ko kana gakava rikamuka? Ndeipi dare inokwanisa kugadzirisa gakava? Ndeupi mutemo unoshanda kune gakava?
Dzimwe nguva, mhedzisiro ichave yekuti dare reDutch rinofanira kushandisa mutemo wenyika kana zvinopesana. Kudzivirira mamiriro ezvinhu aya, isu tinobatsira vatengi veDutch nevekunze munhaurirano nekunyora zvibvumirano kuitira kuti zvive pachena kuti ndeupi mutoo unofanirwa kuteedzerwa kana pakaitika gakava.